बि.सं.२०७३ साल पौष २५ गते सोमवारको राशिफल
नेपाली मितिः वि.सं. २०७३ । नेपाल सं. ११३७ । योग सं. ३७ । पौष महिनाको २५ गते सोमवार ।
अँग्रजी मितिः ई.सं. २०१७ जनवरी महिनाको ०९ तारिख ।
योगः शुभ, ११ः२२ बजेपछि शुक्ल योग ।
तथीः हेमन्त ऋतु पौष शुक्लपक्षको द्वादशी, २३ः५३ बजेपछि त्रयोदशी तिथी ।
नक्षत्रः कृतिका,०८ः१४ बजेपछि रोहिणी नक्षत्र ।
करणः बव १३ः०३ बजेसम्म उपरान्त बालव करण ।
चन्द्रमाः वृष राशिमा ।
काठमाडौंमा सूर्योदयः ०६ः५८ बजे ।
काठमाडौंमा सूर्यास्तः १७ः२४ बजे ।
राहुकालः ०८ः१६ बजेपछि ०९ः३५ बजेसम्म ।
यात्राः दक्षिण दिशाको लागि उपयुक्त छ ।
मेष राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन आँट एवम् जमर्को ठूलै हुनखोज्ने तर काम पूर्ण हुन ग्रहको केही अबरोध रहने गोचरको स्थिति देखिएको छ । तथापि वाणीमा मिठास आउन खोज्नेछ भने बोलीवचनको भूमिकाले मान्छेहरुको मन जित्न मद्दत पुग्नेछ । अल्लि प्रयत्न गरेमा प्रवचन, भाषण तथा अध्यापन एवम् तर्कजन्य विषयको प्रस्तुतिलाई सकारात्मक र प्रभावशाली बनाउन सकिनेछ । व्यवसायबाट आर्थिक लाभ हुनेछ । परोपकार एवम् सामाजिक सेवाका कार्यमा सरिक हुने मौका मिल्नसक्ने छ । ग्रहको अबरोध निवारणको लागि गुरुजनप्रति सेवाश्रद्धा तथा शिक्षाक्षेत्रलाई सहयोग गर्नु शुभकर हुनेछ ।
वृष राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन अनुकूल हुँदाहुँदै पनि ग्रहको केही अवरोधको कारणले अपेक्षित उपलब्धि भेट्टाइहाल्न केही कठिनाई देखिएको छ । तथापि केहीहद्सम्म व्यवसायबाट धनलाभ हुने एवं भौतिक सुख शान्ति र मानप्रतिष्ठा बृद्धि हुनेछ । रोकिएर रहेको कार्य अगाडि बढाउन सकिने छ । सामान्यतया कार्यक्षेत्रमा जिम्मेवारी थपिनसक्ने छ भने सामाजिक कार्यमा सरिक हुनपाइने छ । नयाँ कार्यमा लगानीको सम्भावना पनि देखिन्छ । अभिष्टकार्यमा सफलताको लागि गुरु बृहस्पतिका प्रतिमूर्ति विद्वान गुरुजनबाट आर्शिवाद लिनु वा खुशी पार्नु बुद्धिमानी हुनेछ । आज यहाँलाई एक अंक, रातो रङ्गको प्रयोग शुभ रहनेछ ।
मिथुन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन सामान्य कार्यलाई पनि बढीनै यत्न गरेरमात्रै सफलता पाउन सकिने खालको छ । हतारमा र विना जरुरी फजुलका कार्यमा चेष्टा नगरेकै राम्रो हुनेछ । बुद्धिको भरपुर प्रयोग गरेर अनावश्यक रुपमा धनको क्षति हुने तथा पश्चातापमा पर्न सकिने सम्भावनालाई हटाउन कोसिस गर्नुपर्ला । तीर्थ गमन वा मान्यजनको दर्शनभेटको लागि यात्रा गर्नुले खर्चयोगको सदुपयोग हुनसक्ने छ । यहाँको लागि आज तीन अंक र पहेंलो रंगको प्रयोग हितकर हुनेछ भने गुरु गणपतिको श्रद्धाभक्ति विशेष हितकर हुनेछ ।
कर्कट राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन यद्यपि अर्थकर हो तर पनि अपेक्षा गरेजति आर्थिक उपलब्धि हुन अबरोध कठिन पर्नसक्ने छ । आश्वासन मिलेको काम समयमै नभइदिँदा अल्लि दिक्कत लाग्नसक्ने छ । तथापि शरीरमा स्फुर्ति र काममा रुचि बढ्ने, स्वजनबाट मद्दत मिल्ने, समस्याको निकास निस्कने र दैनिकी व्यवसायबाट केही लाभ गर्नसकिने छ । आज ठूलो उपलब्धि खोज्नु भन्दा पनि भौतिक कर्म सम्पादनलाई प्रार्थमिकता दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । जसबाट पछि लाभ उठाउन सकिनेछ । आँट साहासपूर्वक कुनै कार्यको लागि पूर्वतयारी पूरा गर्ने जस्ता कार्यमा मन दिनु उचित हुनेछ । दुई अङ्क, सेतो तथा ध्वाँसे रङ्गको प्रयोग र भैरवदेव श्रद्धाभक्ति आराधना गर्नु तथा कुुकुरको सेवा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
सिंह राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन पूण्यार्जन गर्ने ईज्जत एवम् प्रख्याति बढ्ने दिन रहेको छ । उच्चतहका अधिकारीसँग संपर्क विस्तार हुनसक्ने छ भने त्यसले महत्त्वाकांक्षी भावना बृद्धि गर्नपनि सक्नेछ । विद्वानजनको सङ्गत पनि मिल्नसक्ने छ । तथापि व्यापार व्यवसायबाट अपेक्षा गरेकै उपलब्धि गर्न अल्लि गार्हो पर्ने देखिन्छ । जागिर एवम् राजनीति तथा समाजसेवाको क्षेत्रमा गर्न खोजिएको कामकार्यमा अल्मल्याहट् नआउला भन्नसकिन्न । सरकारी निकायबाट निम्ट्याउन खोजेको काम पनि अल्झिनसक्ने सम्भावना छ । यहाँलाई आज एक अंक, रातो रङ्गको प्रयोग गर्नु शुभ रहने भने कामकार्यमा आउने अल्झनलाई निराकरण शनिदेवको प्रतिक कागलाई खुवाउनु र हनुमान देवको एवं माँ कालीको दर्शन भक्ति गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
कन्या राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन अतिथि सत्कार गर्न पाइने सम्भावना छ । घरपरिवारमा कुनै विवाह आदि माङ्गलिक शुभकार्यको प्रसङ्ग चल्नसक्ने तथा नयाँ पारिवारिक सदस्य बढ्नसक्ने वा सम्बन्ध विस्तार हुनसक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । व्यवसाय तथा कार्यक्षेत्रमा प्रगति हुनगई राम्रो आर्थिक लाभ हुने तथाबैंकब्यालेन्स बढ्ने छ । परोपकार आदि समाजसेवाबाट सन्तुष्टि मिल्ने छ । प्रशंसकहरु बढ्नेछन् । वाणीमा मिठास आउने छ र मान्छेहरुलाई बोलीवचनले प्रभाव पार्न सकिनेछ । शारीरिक पौरख पनि बढ्ने तथा प्रतिस्पर्धा आदिमा सफलता मिल्ने र उत्साह बढ्ने दिन छ । आज यहाँको लागि दुई अङ्क, सेतो रङ्गको प्रयोग र ऋषिसिद्धिपति श्री गणेशको सेवा आराधना तथा श्रद्धाभक्ति शुभकर हुनेछ ।
तुला राशिहुनेहरुको लागि आजको दिन सिधा रुपमा आफूले सोँचेको अथवा सम्पादन गर्न खोजेको काममा विघ्नबाधा आइपर्नसक्ने देखिन्छ । योजनाभित्रको काम कार्यान्वयन हुननपाउँदा मनमा वेचैनी बढ्नसक्ने छ । स्वास्थ्यमा पनि केही प्रतिकूलताको अनुभव हुनसक्ने छ । दीर्घ रोगीलाई बढीकष्ट हुनसक्ने छ ख्याल पुर्याउनु होला । हतारि“दा झन खति बढ्ने भएकाले नहतारिएकै राम्रो हुनेछ । केही संघर्ष एवं ब्याबधानको बाबजुत अपेक्षा नगरिएको तर्फबाट केही कामहरु बन्ने तथा आर्थिक लगायतको भौतिक उपलब्धि हुनसक्ने छ । आठ अङ्क, रातो रङ्गको प्रयोगको साथमा भगवान श्री गणपतिको सेवाआराधना गर्नाले धेरै हद्सम्म हित हुनेछ ।
वृश्चिक राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन आमोद–प्रमोद तथा विलासवृति बढ्ने ग्रहप्रभाव रहेको छ । पेशा एवम् व्यवसायिक क्षेत्रबाट भौतिक उन्नति तथा लाभ गर्नसकिने छ । सुखसन्तोष कर सन्देश प्राप्त हुनेछ । विवाह आदि माङ्गलिक कार्यमा सरिक हुनसकिने छ । कार्यक्रम आदिमा संलग्न हुन पर्नसक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । भ्रमण आदिको संयोजलाई पनि ग्रहगोचरले लक्षित गरिरहेको छ । विवाहयोग्य उम्मेदवारको लागि विवाहको प्रस्ताव आउनसक्ने छ । आज यहाँलाई सात अंक, उज्यालो रङ्गको प्रयोग र विपरितलिङ्गी सँगको सहकार्य फापसिद्ध हुनेछ ।
धनु राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन तुलनात्मकरुपमा सुधारोन्मुख मान्न सकिन्छ, तथापि गन्तव्यचुम्न कठिन देखिएको छ । हौंस्याहटको कारण बन्ने कामपनि बिग्रने हो कि भन्ने भय देखिएको छ ख्याल पुर्याउनु होला । त्यसको बाबजुत पनि बल एवम् साहस बढ्ने दिन छ, उन्माद्लाई संयम गर्न सकेको खण्डमा केही भौतिक कर्महरु संपादन गर्न सकिनेछ । सर्तमा लचकता अप्नाएर विपक्षीसँग सम्झौता हुनपनि सक्नेछ । वातवायु एवम् स्नायु तथा नशासँग सम्बन्धित विमारको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न स्वास्थ्यमा ख्याल पुर्याउनु होला । ग्रहको दुष्प्रभावमा कमि आओस भन्ने कामना गरी बृद्धा मातृशक्तिको सेवा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
मकर राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन विद्यार्थीको लागि बढी उपयोगी रहनसक्ने छ । बुद्धिविवेकमा बृद्धि हुने तथा त्यसको सदुयोग गर्न पाइने छ । सर्वसाधारणको हकमा पनि दिन स्वभाविक उपलब्धिकर नै रहनेछ । प्रतिष्ठा र छविको बचस्व स्थापित गर्नसकिने र प्रशंसा पनि मिल्नेछ ।सैद्धान्तिक पक्षमा खरो उत्रन सकिने छ । कर्मक्षेत्र तथा व्यवसायमा प्रगति हुनाले आर्थिक लाभ गर्न पनि सकिने छ । सन्ततीको तर्फबाट सुख एवम् सन्तोष पाइनेछ । आज यहाँलाई पाँच अंक, रातो रङ्गको उपयोग शुभ हुनेछ भने विद्याक्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउनु पूण्यकर हुनेछ ।
कुम्भ राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन मनग्य अनुकूल देखिँदैन बरु केही प्रतिकूल महसूस हुनसक्ने छ । मनमा संकोचित विचारले प्रसय पाउने र छरछिमेक–साथीभाई कसैसँग मनमुटाव हुनसक्ने सम्भावना छ, सावधानी आवश्यकता पर्नेछ । मिथ्या आरोप एवम् आलोचना आदिको अपयश खेप्नपर्न सक्नेछ भने कामकार्यमा पनि केही अड्चनको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्ने छ । सकारात्मक ढङ्गबाट प्रतिकार गर्ने मानसिक क्षमता बढाउनु होला ।सत्नियतबाट संघर्षको सामना गर्ने तथा दृढ रहनाले अल्मल्याहट् र अबरोध बाबजुतपनि केही सफलता एवम् व्यवसायबाट लाभ हातपार्न सकिने छ ।
मीन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन विशेष महत्त्व दिइएको कामकार्यमा ग्रहको केही बाधाअबरोध देखिएको छ । तर पनि दिन उद्यमिलो देखिन्छ । शारीरिक जोशजाँगर बढेर आउने हुनाले पुरुषार्थ गर्न सकिने र कार्यक्षेत्रमा खट्न मनलाग्ने छ । नयाँ कामकार्यको योजना निर्माण गर्ने तथा घनिभूत छलफल हुनसक्ने छ । आफन्तीजनसँग भेटघाट हुनाले नातासम्बन्ध नविकरण गर्ने मौका मिल्नेछ । अनावश्यक फुर्ति भने नदेखाएकै राम्रो हुनेछ । कार्यक्षेत्र तथा व्यवहारमा आउने बाधाब्याबधान निवारणहोस भन्ने कामना गरी हनुमानदेवको दर्शनभक्ति तथा स्तुति गर्नु शुभदायक हुनेछ ।
बि.सं.२०७५ साल जेठ ३१ गते बिहीवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल जेठ ३० गते बुधवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल जेठ २९ गते मङ्गलवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल जेठ २८ गते सोमवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल जेठ २७ गते आइतवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल जेठ २६ गते शनिवारको राशिफल